सानो Fashionista, सधैं र सबैतिर वयस्क, आफ्नो आमा र पत्रिकाहरू "टिभी बाट" बालिका जस्तै हुन चाहन्छु। यो तिनीहरूले व्यवहार मात्र छैन तरिका, तर पनि वस्त्र को शैली अनुकरण गर्छन्। उदाहरणका लागि, पनि एक प्रारम्भिक उमेर मा बालिका एडी संग जूता चासो देखाएका छन्। र तिनीहरूले पुरानो हुँदा, तिनीहरूले मेरो आमाबाबुले जूता को एक जोडी स्वामित्व सोधेर सुरु। तर कुनै एक बच्चाको खुट्टा अझै पूर्णतया गठन गर्न सकिन्छ कि सोच्छ। तर पनि धेरै, असम्भव छ, बच्चा राम्रो जूता लगाउने निषेध। र, बच्चा थाक र उहाँसित सम्बन्ध बिगार्छ छैन ताकि, तपाईं आमाबाबु र बच्चा दुवै पूरा गर्न सक्षम छ जो एक वैकल्पिक, रूपमा राम्रो विकल्प फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
बालिका 12 वर्ष र माथिका लागि जूता
त्यसैले, यस लेखमा हामी केन्द्रित हुनेछ असामान्य जूता। आज Snickers एक प्रवृत्ति छलफल। यी जूता हरेक केटी मनपर्छ। यो कुरा जूता केही वर्ष पहिले लोकप्रिय भयो कि छ, तर यो बावजुद अझै पनि तिनीहरूले फैशन पत्रिका को वा समतल, बालिका र युवा महिला कुनै चाहना देखि पृष्ठ कुनै पनि नछोड। यसरी तिनीहरूले स्थितिहरू हात छैन।
साथै, यदि तपाईं किशोरीहरूको मूर्तिहरू हेर्न, तिनीहरू केवल दैनिक जीवनमा पहना जूता। बालिका लागि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो जूता को लोकप्रियता को लागि कारण छ। राम्रो के एक सानो fashionistas प्रसिद्ध गायक Rihanna, वा Britni Spirs, या शायद Dzhennifer Lopes जस्तै नै स्टाइलिश जूता चाहनुहुन्छ छैन?
को जूता के हुन्?
यो यस्तो जूता मूल समतल एकमात्र थियो टिप्पण लायक छ। तर साँच्चै स्त्री जूता बनाउन क्रममा, डिजाइनर एक मंच एकमात्र उभिएर जो पूर्णतया नयाँ मोडेल, साथ आएका छन्। निस्सन्देह, तापनि यो जुत्ता मानिन्छ खेल, तर यो काम को लागि उपयुक्त छैन। तर यो एक उत्कृष्ट उनको साथीहरूसँग र अन्य ठाउँमा भेट्न, दैनिक जीवनको लागि विकल्प उदाहरणका लागि, यो एक पैदल लागि थकित गर्न सकिन्छ, छ। यस्तो जूता को आकस्मिक शैली गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। साथै, वेज वृद्धि मा सुत्छन् एउटा उत्कृष्ट विकल्प छ, slimmer हेर्न।
बालिका लागि जूता को एक प्रतीक हो सडक फैशन। वयस्क यी जूता जंगली आनन्द कारण हुनेछ भने, छोराछोरीलाई यो यसको possessor फैशन रुझान बुझ्नुहुन्छ भनेर अर्थ राख्छ। अक्सर, यो उच्च विद्यालय बालिका धेरै unfeminine, कुनै न कुनै जूता र लागि बालिका शान instilling सुरु गर्न एउटा कारण हुन सक्छ जूता रुचि कि देख्न सकिन्छ। तिनीहरूले थकित हुन देखि मात्र होइन जीन्स संग तर पनि छोटकरीमा, स्कर्ट, कपडे संग गर्न सक्नुहुन्छ।
जूता बस छैन गर्मी लागि तर जाडो लागि हो
बालिका लागि जूता जस्ता जूता अर्को प्लस, यो कुनै पनि मौसम मा पूर्ण थकित गर्न सकिन्छ भन्ने छ।
गर्मी embodiment यस्तो कपडा रूपमा, छाला वा breathable सामाग्री बनेको हुन सक्छ। सामान्यतया एउटा जाडो न्यानो जूता बनाउँछ जो कृत्रिम वा प्राकृतिक फर, ऊन वा महसुस, को तह खुसीले गदगद छ। बालिका लागि जूता फरक रंग को हुन सक्छ, कुनै सीमितता छन्। मोडेल मोनोक्रोम र रंगीन दुवै हुन सक्छ।
के बाट लगाउन?
के तपाईं बालिका लागि छोराछोरीको जूता संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ (फोटो जो एउटा उदाहरण लेख मा प्रस्तुत गरिएको छ)? कुनै पनि मौसम सबैभन्दा सुरक्षित शर्त संयोजन जिन्स-कलिलो आंकडा वा राम्ररी उपयुक्त सुरुवाल, वा लेग्गीन्स संग जूता हुनेछ। यी धनुष अक्सर तिनीहरू, liberated निःशुल्क र सहज महसुस गर्न अनुमति किनभने, सडकमा मा देख्न सकिन्छ। शीर्ष लागि जाँदा, यहाँ विभिन्न, मात्रा र फारम-उपयुक्त रूपमा हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक केटी स्त्री र नाजुक हेर्न चाहन्छ भने, तपाईंले एक turtleneck, शर्ट छनौट गर्नुहोस् वा नजिक उपयुक्त कट ब्लाउज गर्नुपर्छ।
तपाईँलाई नि: शुल्क ज्याकेट, svitshot, शर्ट चयन गर्नुभयो भने, यो एक, हँसिलो चंचल र एक सानो hooligan को छवि गर्नेछ। भने, तर, एक पोशाक चयन, यो बुना वा खेल हुनु हुँदैन आवश्यक छ। जूता लागि प्रत्येक केटी वा महिला प्रेम गर्नुहुन्छ शिफन को उपयुक्त मोडेल पनि छन्। माथिको चित्र एक शहरी शैली लागि स्वीकार्य मानिन्छ। त्यसैले जीन्स मा काट प्राप्त र पोशाक फिट गर्दैन लाग्छ। र तपाईंले सबै बालिका ध्यान केन्द्र बाहिर खडा र हुन चाहनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई विचार गर्दा, राम्ररी प्याज चयन गर्दा बचा। गर्न सक्ने आखिर, जूता को प्रवृत्ति संग कठिन भएको छाया मा रहन छ।
सामान्य मा, यो एक बच्चा बच्चा फैशन प्रेम रूपमा विशेष गरी केटी, धेरै छैन स्त्रीत्व खोप दिनु गर्न आवश्यक छ कि टिप्पण लायक छ। आखिर, आधुनिक फेशन सुन्दर कुरा लगाएका मात्र छैन संभावना, तर, चित्र आफ्नो भावना व्यक्त वरिपरि राम्रो मुड दिन गर्न, liberated महसुस गर्ने क्षमता दिन्छ।
आधुनिक शर्ट्स 2011 चयन गर्न के हो
कसरी विवाह पोशाक चयन गर्न - सुझावहरू स्टाइलिस्ट
बालिका लागि स्वेटर बुनाई: ठूलो आकस्मिक पहनने
होटल Lebed4* (बुल्गेरिया): कोठा, सेवा, को विवरण
शवर: आकार, वास्तविक मूल्य
एस Makovetskii: Filmography, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
नाम Iskander को अर्थ। नाम को व्याख्या